Akamasoa Andralanitra Nampitomboina ny isan'ny polisy miasa eny
Manoloana ny fampiharana ny famehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena dia nidina ifotony teny amin'ny Akamasoa Andralanitra ny minisitry ny
filaminam-bahoaka sy ny Tale jeneralin'ny polisim-pirenena nijery ny fomba hiarovana ireo vahoaka amin'ilay valan'retina "Covid-19" sy hanamafisana ny fandriam-pahalemana eny an-toerana. Tapaka tao anatin'izany ary fa ankoatra ny paositry ny polisy efa misy ao an-tanàna dia ampiana iray hafa indray izany hiarovana ireo mponina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Hampitomboina ihany koa ny polisy misahana ny hery vonjy taitra izay hanao fisafoana amin’ny andro sy alina. Hijery manokana ny fampiharana mahakasika ny fihibohana ary hanenjika ireo mpanao ratsy sy ireo olona tsy manara-dalàna koa ny polisy. Hita ihany koa fa misy ny herisetra hataon'ny olona sasany amin'ireo zaza eny anivon’ny fiaraha-monina eny. Tonga teny an-toerana koa noho izany ny polisy misahana ny herisetra mianjady amin' ny zaza tsy ampy taona sy ny olona marefo nitondra fanentanana sy fampianarana ny mponina mahakasika izany.